अमरदह ढल्के जोवनमा शशस्त्र क्वाटर फाइनल पुग्यो, लेटाङ बाहिरियो - Pradesh Dainik
अमरदह ढल्के जोवनमा शशस्त्र क्वाटर फाइनल पुग्यो, लेटाङ बाहिरियो
बिहिबार, बैशाख २६, २०७६ , प्रदेश दैनिक
प्रदेश स्तरीय तेस्रो अमरदह ढल्के जोवन गोल्डकपमा सशस्त्र प्रहरी बल पकली सुनसरी क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । लेटाङ भेट्रान मोरङलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै पकली क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
खेलको १२ मिनेटमा सशस्त्र प्रहरीको जर्सी नं. ७ का टिकाराम वि.क.ले गोल गरेर टिमको खाता खोलेका थिए । पूनः जर्सी नं. ७ का टिकाराम वि.क.ले २३ मिनेटमा १ गोल थपेर २–० गोलले टिमलाई अग्रता दिलाए । लेटाङ भेट्रानको तर्फबाट जर्सी नं. १० का विनोद लामाले ३२ मिनेटमा १ गोल गरेर टिमलाई सान्तवना दिएका थिए ।
बिहिवारको खेलमा २ गोल गर्न सफल सशस्त्र प्रहरीको जर्सी नं. ७ का खेलाडी टिकाराम वि.क. म्यान अफ द म्याच घोषित भए । खेलमा दोस्रो हाफको २० औँ मिनेटमा सशस्त्र प्रहरीको जर्सी नं. ९ का खेलाडी उत्तम कार्कीले पहेलो कार्ड पाएका थिए । त्यस्तै दास्रो हाफको २९ औँ मिनेटमा सशस्त्र प्रहरीको जर्सी नं. ८ का अर्का खेलाडी विनोद लोप्चनले समेत पहेलो कार्ड पाएका थिए ।
शुक्रवारको खेल आयोजक टिम ए र तेह्रथुम भेट्रान तेह्रथुम बिच हुने आयोजकले जनाएको छ । प्रदेश १ कै सबैभन्दा ठुलो धनराशीको तेस्रो अमरदह ढल्के जोवन गोल्डकप सुनवर्षी २ अमरदहमा रहेको वीरेन्द्र सार्वजनिक मा.वि.को खेल मैदानमा बैसाख २१ गते देखि जेष्ठ ७ सम्म भइरहेको छ ।